तपाईको आज सोमबारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त विशेष शुभ ? « Sansar News
तपाईको आज सोमबारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त विशेष शुभ ?
२५ आश्विन २०७८, सोमबार ०७:५१
त्बगचगकरमाइलो यात्रा र मनोरञ्जनको आनन्द लिने समय छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। विभिन्न भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सकिनेछ। लगनशीलताले नयाँनयाँ काम गर्ने अवसर दिलाउनेछ। साँझदेखि स्वास्थ्यमा कमजोरी देखापर्न सक्छ। केही विवादास्पद कामको जिम्मेवारी समेत वहन गर्नुपर्ला। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम पनि दोहोर्याउनुपर्ला।
चुनौती अँगाल्नुपरे पनि आँटले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू स्वयं पछि पर्नेछन् भने कर्मयोगले भविष्यको बाटो समाउनेछ। मिहिनेतले काममा सफलता दिलाउनेछ। समस्या पन्छाएर अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। रोग तथा शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धाको दौडमा समेत जित हासिल हुनेछ। साँझतिर रमाइलो यात्राको साइत जुर्न सक्छ।
ऋबलअभचसुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउन सक्छ। तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिको प्रभाव बढ्नेछ। साँझदेखि नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। आम्दानीका स्रोत पनि बढ्नेछन्। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ।
हतारमा निर्णय लिँदा काम बिग्रन सक्छ। तत्कालको फाइदा हेर्दा पछिलाई समस्या पर्नेछ। बेसुरमा बोल्ने बानीले पनि दुःख पाइनेछ। अरूलाई दिएको वचन पूरा गर्न नसकिएला। कामको मेसो नमिल्दा पछि परिनेछ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ। समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुहोला।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ, मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम आर्जन हुनेछ। तर भौतिक साधन बिग्रनाले खर्च बढ्न सक्छ। उद्योग र व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ। साँझतिर अरूको वादविवादमा पर्नाले आफ्नो काम रोकिएन सक्छ। साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ला। अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ।
बश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
ब्त्रगबचष्गकअवसर प्राप्त भए पनि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। पुरानो हिसाबकिताब सुल्झाउन समय लाग्नेछ। लगनशीलताले लाभ उठाउन सकिनेछ। स्वार्थका लागि साइनो गाँस्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। मिहिनेतले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। काम गरेर दाम कमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। साँझतिर नयाँ काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। खर्च भने बढ्न सक्छ।
२०७८ असोज २५ गते, सोमवार, (११ अक्टोबर २०२१)
तपाईको आज आइतवारको राशिफल भन्छ– आज यी पाँच राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान